Norton 360 အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
5.17.2.210909032 for Android
4.6 | 50,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် XAPK（26.6MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Norton 360: Online Privacy & Security
Norton 360 သည်သင်၏ Android စက်များအတွက်ဗိုင်းရပ်စ်များ, Ransomware, malware နှင့်အခြားအွန်လိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်အခြားအွန်လိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုများ,
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်အိမ်တွင်ကာကွယ်မှုရှိပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသော VPN မှဘဏ် - တန်းစာဝှက်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည် Cyberscriminals ကိုအိမ်သို့နှင့်အများပြည်သူသုံး Wi-Fi နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါပေးပို့ပြီးလက်ခံရရှိသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရယူခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ 
၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်လုံခြုံရေးပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့် OS အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုလည်းစစ်ဆေးသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် forvulerabiles များကိုအန္တရာယ်ရှိသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် OS အားနည်းချက်များကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည့် andcyberabacks ကိုစောင့်ကြည့်သည်။
အက်ပလီကေးရှင်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်သည်သင်၏ Android စက်ကိုအက်ပ်များမှအန္တရာယ်များသို့မဟုတ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအပြုအမူများဖြင့်ကာကွယ်ပေးသည်။
Norton 360 သို့ဆိုင်းအင်ဝင်ရန် Google သို့မဟုတ် Apple အထောက်အထားများကိုသုံးပါ။
br darks dark dark
- ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရှာဖွေလျှင်, Google Play အတွက်
b> - malware, Ransomware, adware နှင့် privacty ယိုစိမ့်မှုကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုများကိုကာကွယ်ရန်သူတို့ကိုမကူးယူမီ scans လုပ်ပါ။
ရှိပြီးသားအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောအက်ပလီကေးရှင်းအကြံပေး - သင်၏လက်ရှိအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် app updates များကို malware, Ransomware နှင့် privacters နှင့် privacy ယိုစိမ့်မှုကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ။
b> - သင်၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများ, ဗိုင်းရပ်စ်များ, Spyware, malware နှင့်အခြားအွန်လိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုများကိုဆန့်ကျင်သောသင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာအတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီကာကွယ်မှု။
b> -0မ်းသာသောကွန်ယက်များအကြောင်းအကြောင်းကြားရန်သို့မဟုတ်သင်၏ Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကိုခိုးယူရန်သို့မဟုတ်သင်၏ကိရိယာကိုခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ကိရိယာကိုကူးစက်နိုင်သည့် Cymbercriminals မှခိုးယူခြင်းခံရသည့် Cymercriminals မှသတိပေးခံရ malware နှင့်အတူ။
- ဘဏ် - တန်းစာဝှက်ခြင်း၏အာမခံချက်နှင့်အတူ Wi-Fi နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါသင်အကြိုက်ဆုံးအက်ပ်များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရယူပါ။ 
b >> သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော browser သို့မဟုတ် app များ, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အီးမေးလ်များမှဖွင့်လှစ်သည့်အခါလိမ်လည်လှည့်စားခြင်း (phishing) နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်ကူညီသည်။
app propertion ကိုကြည့်ပါ) သို့မဟုတ်သင်၏ Google Play အကောင့်အတွင်းငွေပေးချေမှုကိုရှောင်ရှားရန်အဆုံးမတိုင်မီသင်၏ Google Play အကောင့်အတွင်းရှိသို့မဟုတ် 14 ရက်ကြာရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက်သင်၏ subscription ကိုနှစ်စဉ်စတင်ပြီးသက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်။0ယ်ယူပြီးနောက်သင်၏ Google Play Settings သို့ သွား. အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်းအားဖြင့်ပိတ်ထားနိုင်သည်။
AV-Test, "အကောင်းဆုံး Android Security 2019 ဆု" မတ်လွန်မိုဘိုင်းလုံခြုံရေးအတွက် "အကောင်းဆုံး Android လုံခြုံရေး" ။ 2020: လက်ပတ်လုံးအတွက် Norton 360 Mobile embeds တူညီသောဆု - အနိုင်ရ Norton မိုဘိုင်းလုံခြုံရေးကိရိယာလုံခြုံရေးအတွက်။ https://www.av-test.org/en/news/av-test-award-2019-for-nortonlifelock/
NortonLifeLock သင်၏ privacy ကိုလေးစားပြီးသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက http://www.nortonlifelock.com/privacy ကိုကြည့်ပါ။
ဘယ်သူမှ cybercrime သို့မဟုတ်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
 လုံခြုံသော VPN ကိုနိုင်ငံအားလုံးတွင်မရနိုင်ပါ။
နိုင်ငံအားလုံးတွင်အမှောင်ဝက်ဘ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းကိုမရရှိနိုင်ပါ။ စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သောသတင်းအချက်အလက်သည်နေထိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်အစီအစဉ်ရွေးချယ်မှုအပေါ် အခြေခံ. ကွဲပြားသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးချက်ချင်းစတင်ရန်ဖြစ်သည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက်နောက်ထပ်အချက်အလက်များထည့်ရန်သင်၏အကောင့်သို့ဆိုင်းအင်လုပ်ပါ။
ဤအက်ပ်သည် device administrator ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုသည်။
ဘာအသစ်လဲ Norton 360: Online Privacy & Security 5.17.2.210909032
We continue to update Norton 360 in order to help better your app experience. Our newest version includes:
Norton 360 Antivirus review | PROS & CONS
Norton 360 Review: Is it the ULTIMATE All-In-One Online
Norton 360 Deluxe Review 2021: The Truth Might Surprise You! (🔥Get 70% Off)
Norton 360 Review | The Best Security Manager for Your Devices
Norton Secure VPN Review - HONEST REVIEW!
Norton 360: Online Privacy & Security 5.16.0.210818001
Norton 360: Online Privacy & Security 5.15.0.210804002